Borg scale | Nutri Diet
Mety efa naheno momba ny inona ianao Mizana Borg na mety ho sambany ianao liana amin'ity fotokevitra ity.
Hilaza aminao eto ambany izahay hoe inona marina ity mizana ity, inona no ilana azy sy ny maha-zava-dehibe izany. Vakio hatrany raha te hahalala momba an'io fomba fandrefesana ny fotoananao io mandritra ny hazakazaka sy ny dikan'izy ireo.
Ny mizana Borg dia fomba iray ampiasaina hahitana hoe hatraiza ny ezaka ataontsika rehefa mivoaka amin'ny hazakazaka isika, manandrana mamantatra hoe inona ny haavon'ny havizanana rehefa manao ity taranja atletisma ity.
Misy ifandraisany mivantana amin'ny fahatsapana ny ezaka hitan'ny atleta na izay manao fanatanjahan-tena misy sanda isa, mandraka androany teo anelanelan'ny 0 sy 10. Ny tanjona dia ny hifehezana tsara ny havizanana ary hahafantarana izay vokatry ny fiofanana arakaraka ny hamafin'ny fanatanterahana isaky ny fivoriana.
Ilaina ny fitepon'ny fo Mba hahafantarana hoe inona ny ezaka ataontsika ary manao ahoana ny fontsika, na izany aza, ity fomba Borg ity dia masontsivana ambanin-javatra kokoa hahitana an'io ezaka io rehefa mivoaka hazakazaka isika.
Manaraka izany, holazainay aminao bebe kokoa momba an'io mizana io, ny fomba nisehoany, ny fomba hanatanterahantsika azy ary inona marina izany.
1 Inona ny mizana Borg
2 Hatao inona ny mizana Borg?
3 Ahoana ny fampiharana azy
3.2 Latabatra Borg novaina
3.3 Ny dikan'ny soatoavina
Inona ny mizana Borg
Ity refy ity dia novolavolain'i Gunnar Borg, izay taratry ny ezaka hita ho an'ny mpihazakazaka miaraka amin'ny sanda isa manomboka eo 0 hatramin'ny 10. Izy io dia safidy hafa manan-kery nefa koa subjectif, hahitana ny haavon'ny fangatahana amin'ny fiofanana.
Tsy mila fitaovana handrefesana izany, ka mety ho an'izay te hahalala an'io sanda io. Sarobidy azo itokisana izy io ka raha te hahalala hoe inona ny haavon'ny havizananao rehefa miofana ianao dia lazainay foana aminao hoe ahoana no hahitanao izany.
Hatao inona ny mizana Borg?
Ity mizana ity dia ahafahana mahita haavon'ny fiofanana sasany.
Mifehy ny havizanana.
Sakano tsy hanana a fampiofanana be loatra manimba ny vatantsika sy ny fahasalamantsika.
Mizana izany subjectif.
Ampahafantaro ny haavon'ny ezaka na asa vita nandritra ny fampiofanana anay.
Izy io dia mifandraika amin'ny fahitana ny ezaka ary famantarana ara-batana toy ny fitepon'ny fo, ankoatry ny hafa.
Ahoana ny fampiharana azy
Raha te hahalala ny haavon'ny havizanana isika, voalohany indrindra dia mila manana fikirizana ny fivoahana amin'ny hazakazaka ary mifehy isan'andro, soraty ny fahitanay ny ezaka isaky ny fotoam-pampiofanana miaraka amin'ny isa isa amin'ny mizana. Ny sanda izay nisy ambaratonga 20 tamin'ny voalohany fa rehefa nandeha ny fotoana dia novaina mba hamela azy 10 fotsiny mba hanamorana ny fampiharana azy.
1-7 m ary malefaka be
7-9 malefaka be
9-11 malefaka be
11-13 zavatra mafy
15-17 tena mafy
17-20 tena mafy be
Latabatra Borg novaina
0 tena malefaka be
1 malefaka be
2 malefaka be
Zavatra sarotra 5
7-8 tena mafy
9-10 tena mafy be
Miaraka amin'ireo soatoavina ireo dia afaka mahafantatra mora foana izay ho vokatry ny fampihetseham-batana isika arakaraka ny hamafin'ny fanatanterahana.
Mba hampiharana tsara ny soatoavina dia mila traikefa vitsivitsy isika mamaritra tsara kokoa ny fahasarotana sy ny ezaka ny fampihetseham-batana ataontsika, ary koa ny tena fahalalana ny dikan'ny tsirairay amin'ireo ambaratonga.
Izy io dia refy iray izay mifameno amin'ireo ambiny farany mety ho haavon'ny fitaovana mety ho hitantsika ankehitriny, na izany aza, raha tsy manana fidirana amin'ny fitaovana hafa isika dia afaka mampiasa azy io mba hisorohana fa mihoatra sy miteraka fihoaram-pefy tafahoatra amin'ny zavamananaina.
Ny dikan'ny soatoavina
Ny ambaratonga telo voalohany azontsika lazaina dia ny asa ambanin'ny aerobika.
Eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny fito no aerobics izany dia mila ezaka bebe kokoa hanatanterahana.
Haavo ambonin'ny fito, dia ny fampiharana izay mila kaloria sy fandaniam-bola bebe kokoa.
Ny tombony an'ity mizana ity dia ny fampiasana mora ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy mitaky vola izany, io dia rafitra tsy maintsy ampifanarahintsika rehefa mandeha ny fotoana, io dia hanampy antsika hanombatombana ny hamafintsika raha tsy mila mpanara-maso ny fo na mitovy aminy fitaovana.
Ny iray amin'ireo lesoka amin'ity ambaratonga ity dia, araka ny nambarantsika, dia rafitra iray tena mizaka tena sy fomba fijery manokana izy io., ny ezaka sy ny havizanan'ny olona Miovaova arakaraka ny olona, ​​tsy maintsy jerenao ny fahasalaman'ny olona manao fanatanjahan-tena, ny taonany, ny lahy sy ny vavy ary ny toe-batana amin'ny fotoana anaovany azy.
Tena manokana ny fahitana ary noho izany dia tena subjectif. Mihobia amin'ny hazakazaka manaraka, na ny kilasy manaraka mihodina, satria tsy vitan'ny hoe afaka manisa azy io isika rehefa mivoaka hazakazaka, afaka mampiasa azy io koa rehefa manao kilasy mihodina, mivoaka miaraka amin'ny bisikileta na mandeha haingana.
Amin'ny manaraka manao asa ara-batana mila fanofanana ianao, ataovy fampiharana io refy io ka rehefa mandeha ny fotoana dia azonao atao ny mamaritra ny haavon'ny ezakao, ny havizanao ary ny hamafinao mba hahitana vokatra tsara kokoa amin'ny manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena » Mizana Borg